January 6, 2021 - समृद्ध नेपाल
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालै भरी समाज सेवी विनयजंग बस्नेत पुजा विश्वकर्माको विबाहको विषयले चर्चा पाई रहेको छ । विनय र पुजाको विबाहको विषयमा यी दुवैले खुलेरै कुरा गर्न थालेका छन् एउटै क्षेत्र अनि एकअर्कालाई एउटै मन भएर बुझेको दाबी गर्दै यी दुवैले एकअर्कालाई आफ्नालागी योग्यको ठानेका छन् । पुजा बाँकेकी हुन् । उनी पनि बेवारिसेहरुलाई
भारतमा बर्ड फ्लु देखिए संगै नेपाल सरकारले जारी गर्यो यस्तो जरुरी सुचना !
भारतको चार वटा प्रदेशमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको छ भारतबाट नेपाल भित्रिने पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको कारोबारमा उच्च निगरानी राख्न माताहतका क्वरेन्टाइन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ पशुपन्छीको आयातमा स्यानिटरी सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्न र पशुपन्छीको खुल्ला व्यापारमा कडाई गर्न
पैसा कमाएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी काम, नत्र भइन्छ फेरी कंगाल !
आजभोलि धेरै मानिस धन कमाउन जुटने गर्दछन्। केही मानिस यता हुने गर्दछन् जसले समयमै आफ्नो पैसाको सदुपयोग गर्न सक्दैनन् र जम्मा मात्रै गरेर राख्ने गर्दछन्यस्तो अवस्थामा उक्त पैसा सदुपयोग बिनै नास हुने सम्भावना हुने गर्दछ। आचार्य विष्णु शर्माले धन कमाएपछि गर्दै पर्ने केही कामका बारेमा बताएका छन्। जो शास्त्रमा उल्लेख गरिएका छन्।आउनुहोस् जानौँ ती कामअर्थात
पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनशिपको फाइनमा नेपाली टिम, विजेता भए पाउने करौड़ो !
पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनशिप पीएमजीसी २०२०को फाइनलमा नेपाली टिम एबरप्ट स्लेयर प्रवेश गरेको छ पीएमजीसीमा अब नेपाली टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनशिप २०२०को फाइनल आगामी जनवरी २१देखि २४ सम्म सञ्चालन हुनेछ । सुपर विकेण्ड राउण्डमा स्लेयरले १०औं स्थान ओगट्दै ग्लोबल च्याम्पियनशिपको फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो यसअघि पब्जी मोबाइल
इन्दिरा जोशी मलाई विस्थापित हुन्छु कि भन्ने डर छैन !
गायिका इन्दिरा जोशी भन्ने वित्तिकै दर्शकले चुलबुले स्टेज क्विनको रुपमा चिन्छन् । केही दर्शकले त उनलाई हट गायिका पनि भन्छन् । तर उनै इन्दिराले सार्वजनिक गरेको नयाँ गीत बेग हानी गाकोले प्रेम विछोडको भावना बोलेको छ । भिडियोमा जातिय विभेद र त्यसले प्रेममा निम्त्याउने वियोगान्त कथालाई प्रस्तुत गरेको छ यो गीतमा इन्दिरा जोशी र कर्माले
एक सय एक किलोको माला लगाएर मन्त्रीलाई गृह जिल्लामा स्वागत !
पहिलो पटक मन्त्री बनेर गृह जिल्ला धनुषा आउनुभएकी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोलाई एक सय एक किलोको माला लगाएर स्वागत गरिएको छ । मङ्गलबार गृह जिल्ला धनुषा आउनुभएकी मन्त्री महतोलाई जनकपुर विमानस्थलमा नेता कार्यकर्ताहरूले एक सय एक किलोको माला लगाएका हुन् त्यस्तै मन्त्रीको स्वागतका लागि गाँउगाँउबाट बिहानैदेखि सवारीसाधनमा नेता कार्यकर्ताहरू जनकपुर पुगेका थिए
बालिका खड्का बालुवाटारबाट पक्राउ !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की कार्यकर्ता बालिका खड्का पक्राउ परेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गेटमा धर्नामा बस्न लागेपछि प्रहरीले बुधबार दिउँसो खड्कालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।पूर्वएमाले पृष्ठभूमिको राजनीतिबाट आएकी खड्काले यसअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आफ्नो श्रीमान भएको दावी गरेकी थिइन् । त्यस्तै उनले मुख्यमन्त्री राईबाट अंशबण्ड स्वरुप सम्पती पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी समेत दिएकी
उदयपुरको होक्सेमा टिपर र मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किंदा आगलागि !
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका७ होक्से सित्तले डाडामा टिपर र मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किंदा आगलागि भएको छ । आगलागिबाट मोटरसाईकल पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने टिपरमा समेत क्षति भएको छ । दुर्घटनामा मोटरसाईकल चालक जिल्ला पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका६ का २१बर्षीय सन्त कुमार आङदाम्बे र जिल्ला रामेछाप सुनपत्ती गाउँपालिका४का २३बर्षीय अमूल्य तामाङ घाइते भएका छन् प्रहरीका अनुसार
बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँदा ममीले बाबु भनेको त्यो मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ
कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका४ कौवापुरकी ५०वर्षीया नन्दकली उपचार गर्न छोराको मोटरसाइकल चढेर नेपालगञ्ज आएकी थिइन्। तर घर फर्किनै नपाइ उनीमाथि बाघले झम्टियो।केही दिन यता छाति दुख्न थालेपछि भारतमा भएका श्रीमानको सल्लाहमा २२ वर्षीय छोरा सन्तोषको मोटरसाइकल चढेर चेकजाँच गर्न हिँडेकी थिइन्। उनलाई सुगर (चिनी रोग थियो।नेपालगञ्ज आएर छातिको सिटी स्क्यान गरे। डाक्टरलाई देखाए। उपचार सकिँदा दिन